तपाईलाई नेपाली क्रिकेट बारेमा थाहा छ?
यु-१९ को बारेमा मैले जानकारी लिइरहेको छु। तर सिनियर टोलीबारे खासै केही थाहा छैन। सिनियर टोलीको यु ट्युबमा भएको खेलहरूको केही झलक भने मैले हेरेको छु। इन्टरनेटबाट मैले नेपालको बारेमा जानकारी लिइरहेको छु र म त्यसैको तयारी गर्दैछु।
तपाईलाई कुनै नेपाली खेलाडी र उसको क्षमताबारे थाहा छ कि?
नामका हिसाबले मलाई केही थाहा छैन। मैले अघि नै भनिसकेँ म त्यसैको तयारी गर्दैछु। म उनीहरूलाई त्यही काठमाडौंमै भेट्ने तयारीमा छु।
नेपालको प्रशिक्षक बन्न कसरी इच्छुक हुनुभयो?
भारतमा भएको विश्वकप दौरान मैले क्यानाडाको प्रशिक्षकबाट राजिनामा दिने सोच बनाएको थिएँ। त्यही समयमा विनयराज पाण्डे (नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष) ले मलाई नेपालको प्रशिक्षक बन्न प्रस्ताव गर्दै इमेलहरू पठाएका थिए। इमेल आदानप्रदानपछि मैले नेपालको क्रिकेटलाई सहयोग गर्ने मनसाय बनाई प्रशिक्षक बन्न तयार भएँ।
नेपालको क्रिकेटमा तपाईको के योजना छ र कस्तो सफलता पाउने आशा गर्नुभएको छ?
ट्वान्टी-२० क्रिकेटको माहोलमा म प्रशिक्षक बन्दै छु र यसमा सबै प्रदर्शन महत्व हुन्छ। म नेपालको वरियतालाई माथि उठाउन केन्द्रित हुन्छु। राष्ट्रिय टोलीमा मात्र केन्द्रित भयौं भने त्यो दिगो हुँदैन। क्रिकेट विकासका लागि उमेर समूहदेखि नै जग बलियो बनाउनुपर्छ।
श्रीलंका एक महान खेलाडी रोय लुक डायसको स्थानमा तपाई आउँदै हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
रोय राम्रा खेलाडी र प्रशिक्षक हुन्। उनी श्रीलंकाका प्राविधिक रूपमा निपूण ब्याट्सम्यान थिए। मैले नेपालमा पनि राम्रा खेलाडी छन् भन्ने सुनेको छु। उनको स्थान लिएपछि भन्नुपर्दा म नेपाललाई वरियतामा माथि चढाउन चाहान्छु र नेपालको प्रदर्शनमा केन्द्रित हुन चाहन्छु।
नेपाली प्रशिक्षकको रूपमा तपाईको पहिलो कार्यकाल घरेलु मैदानमा हुने एसिसी ट्वान्टी-२० बाट हुँदैछ। नेपालको खेलमा उपस्थित हुने घरेलु समर्थकका बारेमा जानकार हुनुहुन्छ होला। यो चुनौतीलाई कसरी हेर्नु हुन्छ?
म यस्तो वातावरणमा अभ्यस्त नै छु। घरेलु भूमिमा खेलाडीलाई राम्रो खेलाउन मलाई सजिलो हुन्छ होला भन्ने आशा गर्छु।
विश्व ट्वान्टी-२० को छनोट यात्रा हो एसिसी ट्वान्टी-२०, तपाईले के आशा गर्नुभएको छ?
हामी शीर्ष चारभित्र रहेर अर्को चरणमा छनोट हुन चाहन्छौं। शीर्ष चारभित्र पर्न हामी कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौं।
तपाईलाई थाहा भएसम्म नेपालको बलियो र कमजोरी पक्ष?
मैले थाहा पाएसम्म नेपालको बलिङ र फिल्डिङ धेरै राम्रो छ। विशेषगरी दबाबको स्थितिमा खेल्दा ब्याटिङ चिन्ताको विषय हो भन्ने सुनेको छु। यसलाई सुधार गर्न म काम गर्नेछु। मलाई लाग्छ आउने प्रतियोगितामा हाम्रो राम्रो सम्भावना छ।
नेपाल र क्यानाडाको क्रिकेट स्थिति फरक छ भन्ने तपाईलाई लाग्दैन?
दक्षिण एसियालीहरू यहाँ आउन थालेपछि क्यानाडाको क्रिकेटको विकास भएको हो। बेसबल, हकी क्यानाडामा क्रिकेटभन्दा धेरै लोकप्रिय छ। तर नेपालमा क्रिकेट मुख्य खेलहरूमध्ये एक हो। नेपालसँग प्रतिभावान खेलाडी पनि छन्। एसोसिएट देशहरूमा प्रशिक्षण दिनु कठिन कार्य हो। कतिपय ठाउँमा नियमित अभ्यासका लागि खेलाडीहरू नै आउँदैनन्। नेपालमा भने त्यस्तै समस्या नरहेको मैले सुनेको छु।
क्यानाडाको प्रशिक्षक भएको अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ? र, नेपालको प्रशिक्षकको रूपमा के छाप छोड्न चाहनुहुन्छ?
विश्वकपमा छनोट हुनु कठिन कार्य थियो। मैले त्यसमा सफलता हात पारेँ र तीन वर्षभन्दा बढी क्यानाडाको प्रशिक्षक भएकोमा गर्व गर्ने थुप्रै ठाउँ छ। म नेपालमा पनि पहिचान बनाउन चाहान्छु। नेपाललाई अझ माथि पुर्‍याउने मात्र होइन सम्भव भएसम्म विश्वकपमा पुर्‍याउने मेरो चाहाना छ। अझ त्यसभन्दा बढी मैले जिम्मेवारी छाड्ने बेलामा मेरो कार्यको प्रशंसा हुने वातावरण बनाउने चाहना छ।
अन्त्यमा, तपाई काठमाडौं कहिले आउनुहुन्छ?
निर्धारित तालिकानुसार सेप्टेम्बर २९ मा काठमाडौं आउँदै छु।